Tiifiiga Fox News oo tirtiray war uu ka qoray weerarka masaajidka Kanada - BBC Somali
Image caption Lix ruux oo cibaadaysanaysay ayaa lagu dilay weerarkaas
Tiifiiga Fox News ayaa tirtiray qoraal uu Twitter-kiisa soo dhigay oo sheegaya in ninka weerarka ka gaystay masaajidka Kanada uu asal ahaan ka soo jeedo Marooko, laakiin markii, ka dib markii uu codsi ka soo gaaray xafiiska ra'iisalwasaaraha Kanada.
Madaxa arrimaha warfaafinta ee ra'iisal wasaaraha Kate Purchase, ayaa sheegtay in tiifiiga Fox uu faafinayo war "aan xaqiiqo ahayn" oo uu ku salaynayo wararkii markii hore la isla dhexmaray.
Lix ruux oo Muslimiin ah oo cibaadaysanaya ayaa la toogtay oo la dilay, 19 kale ayaana isla weerarkaas lagu dhaawacay.
Alexandre Bissonette oo haysta dhalashada Kanada asal ahaanse Faransiis ah ayaa lagu soo oogay dacwad weerarkaas la xiriirta.
Lahaanshaha sawirka @FoxNews
Image caption Qoraalka uu Twitterka soo dhigay tiifiiga Fox ayaa wali ku sii jiray ilaa iyo fiidnimadii Talaadada
"Qofka looga shakisan yahay weerarka masaajidka Quebec waa qof asal ahaan ka soo jeeda Marooko, ayay wararku tilmaamayaan" Twitterka la dhibsaday ayaa sidaas u qornaa.
Xaqiiqada ayaa ah in markii hore ay wararku sheegeen in labo nin oo la qabtay uu midkood asal ahaan ka soo jeedo Marooko, laakiin ninkaas ayaa markii dambe sidii makhraati loola dhaqmay lana sii daayay isaga oon wax dacwad ah lagu qaadin.
Tiiga Fox ayaa wararkiisa cusboonaysiiyay oo macluumaadka dambe qoray, laakiin ma aysan tirtirin warkii hore ee khaladka ahaa. Twitterka Fox waxaa ku taxan 13 milyan oo wararka ka dheehata.
Kate Purchase, tweeterka ku qortay codsi ay Fox ku waydiisanayso in uu warkaas ka laabto ama ku cusboonaysiiyo dhalashada saxda ah ee qofka loo haysto weerarka.
Waxay sheegtay in ay u baahanyihiin in bulshadoodu ammaan hesho oo ay midoobaan intii la siku dayi lahaa in darbiyo la dhisi lahaa oo bulshooyin lagu marmarsiinyoon lahaa.
Markii Twitterka la tirtirayna waxay Twitterkeeda ku soo qortay "FoxNews wuu ku mahadsan yahay tirtiridda Tweeterka. Waana bogaadinaynaa".